Maxaad ubaahan tahay inaad abuurto dib-u-celin tayo sare leh PR-gaaga?
Qodobka ugu muhiimsan ee raadinta mashiinka raadinta waa shaki la'aan dhismaha. Makiinadaha raadinta waxay isticmaalaan gadaal dib u-dajin ah sida moobiilka. Taageerada tayada sare leh waxay tilmaameysaa goobtaada, fursadaha aad ugu roon tahay SERP aad u sareeya. Dib-u-qabadka Dofollow wuxuu u sahlaa Google in ay go'aamiyaan awoodda bogga internetka iyo darajadiisa. Taasi waa sababta aad u hagaajinayso booskaaga goobta bogga natiijada raadinta iyo soo jiidashada gaadiidka intaa ka badan; waxaad u baahan tahay inaad xoogga saartid dib u eegida bogga internetka ee PR.
Maqaalkan gaaban waxaa loogu talagalay inuu ku tuso sida loo helo bogga dib u celinta PR-da ee tayo sare leh. Laakiin marka hore, aan kuu sharraxo waxa ay yihiin dib u ceelasha.
Dofollow backlinks iyo doorka jiilka gaadiidka
Dofollow Backlinks waa isku xirnaanta dibadda ee shabakadaha kala duwan ee tilmaamaya ilahaaga webka. Xidhiidhyadani waxaa kale oo loo yaqaanaa xiriirada gudaha ama dibadda. Xidhiidhyadani waxay u oggolaanayaan in ay isku gudbiyaan juice ka mid ah ilaha kale. Marka kumbuyuutarada Google ay ku socdaan goobtaada, waxay u tixgelinayaan oo keliya macluumaadka goobta ku yaala laakiin sidoo kale waxay u diri kartaa calaamadaha banaanka ah sida xiriirada dibadda. Haddii xiriiriyayaashu yihiin kuwo dofollow ah, ka dibna raadinta bots waxay ku xisaabi doonaan juice isku xiran iyaga. Dib-u-hagaajinta PR-ga ee tayada leh waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa habka mashiinka raadinta u eegto goobtaada.
Sidaa daraadeed marka aad rabto inaad abuurto xiriirkaaga, waxaa fiican inaad xoogga saarto dadaalka dhismahaaga ee ku saabsan ilaha kuu ogolaanaya inaad sameysid. Natiijo ahaan, xiriirada tayo sare leh, xiriirka tooska ah ayaa hagaajin doona darajadaada boggaaga oo sare u qaadaya awoodaada astaanta.
Maxay yihiin siyaabaha lagu heli karo dhabarka dambe ee tayada?
Waxaa jira siyaabo badan oo kala duwan sida aad u heli karto isku xirnaanta bogaggaaga. Si kastaba ha ahaatee, waxaan u baahannahay inaan diirada saarno kaliya dib u celinta PR ee dib u celinta. Helitaanka maaha mid aad u fudud sida aad u malaynayso. Sidaa daraadeed aan ka wada hadalno sida faahfaahsan ee loo faahfaahin karo iyo meesha laga heli karo dhabarka dambe.
Si loo helo tayada iyo dib-u-dhaqaleedka dabiiciga ah, waxaad u baahan tahay inaad kaqaybqaadato doodaha. Waxaad u baahan tahay inaad noqoto qof firfircoon oo ku habboon golahaaga nuucyada oo aad uga tagto faallooyin faa'iido leh oo macquul ah oo hoos imaanaya mawduuc kasta oo cusub. Si kastaba ha noqotee, had iyo jeer ha isku dayin inaad noqoto kan ugu horreeya ee wadahadalka ah inuusan u muuqan mid laga shakisan yahay maamulka. Forumyada waa meel aad u fiican oo kor u qaadaya ganacsigaaga, abuuro xiriiro cusub oo kordha sumcaddaada caanka ah. Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad ka hadasho ugu yaraan siddeed mowduucyo adigoon ku darin dhabarkaaga, kadibna kaliya bilaabi dhismaha qaar ka mid ah dhiirrigelinta dabiiciga ah. Si kastaba ha ahaatee, waa inaadan aheyn mid joogto ah oo qallafsan.
Blogger dib u eegis
Waxaad kobcin kartaa ganacsigaaga adoo gaari doona mareegaha kale ee la xiriira bloggers iyo u oggolow inay dib u eegaan alaabtaada ama adeegyadaada. Sidaa daraadeed, marka hore, waxaad u baahan tahay inaad hesho boodhadhka saxda ah si aad u abuurto xiriiro ku haboon oo kuu keenaya gaadiidka. Pitch kaliya alaabo muhiim ah si bloggers. Haddii kale, waxaad halis u tahay in aad soo saarto aragti xun ee astaantaada. Ka dibna raadso hab aad kula xiriirto bloggers. Sida caadiga ah, meesha ay ku qoran yihiin macluumaadka xiriirka ee cinwaanka ay blog. Waxaad ku qori kartaa email ama la xidhiidh isaga ama iyada iyada oo loo marayo LinkedIn. Haddii aad hesho jawaab togan, markaa waa waqtigii aad ku qaylin lahayd alaabadaada. Waxaad u baahan tahay inaad doorato alaabta ugu fiican ee aad leedahay si aad u abuurto aragtida saxda ah ee astaantaada Source .